"Isikrini sokufa", okukhulunywe DSoD, ajwayelekile cishe njalo umsebenzisi ukhona yini umuntu ongakaze nge okusebenza izinhlelo Windows. Khona kanye ukubukeka kwawo kungahle kubangelwe yezizathu ezihlukahlukene. On isibonelo se-Windows 10 ukubheka isimo ngephutha SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED. Yini-ke uwukuthi kufanele kwenziwe kanjani ukuqeda enkingeni enjalo, ngeke yini kube lula ukuziqonda uma ukuthola izinhlobo ezinkulu amaphutha ezinjalo nezimbangela zabo.
Iphutha BSOD SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED: izimbangela
Eqinisweni, njengoba umthetho, e-Windows 10, ngakho isikrini ukuhluka konke laligujwa kumasistimu ngaphambili, futhi kubukeka elunge noma okuthize. Noma kunjalo, izizathu ukubukeka kwayo ezimweni eziningi, ahlale cishe kuyafana.
Kungaba yini. Mhlawumbe ukubukeka amaphutha SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED ngenxa yokungabi bikho isikhala kwi drive kanzima ukufaka noma ugijime uhlelo, mhlawumbe inkinga akasebenzisi, engafanele ifakiwe, noma alihambisani ne ohlelweni umshayeli zedivayisi, mhlawumbe isizathu iyona nguqulo noma izilungiselelo BIOS noma ingabe kuphundla tekusebenta inkumbulo. Asikabi khona ukhetho lapho Isistimu okwamanje usebenzisa ezinye isofthiwe kufinyelelwa ukude. Kodwa kwazi bani ukuthi kungase kubonakale kancane!
Thumela SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED (Windows 10): Ukuhunyushwa
Ukuze siqale ukuqondisisa ukuthi iphutha ngesikhathi inombolo MISA: 0x0000007E, elihambisana umbiko ongaphezulu, kunjalo jikelele. Ukuze acacise izizathu ivela khona kufanele kubhekwe zencazelo olwengeziwe.
Ngokwesibonelo, incazelo 0x80000002 ikhodi: STATUS_DATATYPE_MISALIGNMENT kubonisa nephutha elihlobene ne-kokunikezwa kwe-isixhumanisi idatha. Ukuhunyushwa 0x80000003: STATUS_BREAKPOINT ubonisa ukungabi nakwenzeka kwento kokujoyina senkinga ikhenela. Inketho 0xC0000005: STATUS_ACCESS_VIOLATION ibika ukwephula lapho kufinyelelwa imemori, njll Lapha ungakwazi futhi uthole lezi izinhlobo amakhodi njengoba 0xFC937E04, 0xFC938104 noma 0x804E518E ... Kodwa manje kuzofundwa izinkinga ezivamile.
izindlela ezilula kwenhlekelele
I izimo banal kakhulu, iphutha uma kukhona SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED kungokwemvelo lokungafani 'nensimbi' nezidingo yesistimu yokusebenza.
Ukuze kuqedwe lezi glitches ngaphambi kokufaka efanayo Windows 10 noma ubuyekeza uhlelo olukhona ukuze version yeshumi kufanele kuqala kahle ukutadisha eziyisisekelo nezidingo, isibonelo, indawo esemthethweni Microsoft, na eziqhathanisa amakhono inhlelo yamasu abo, ngemva kokuba sesamukele ulwazi kusuka izakhiwo imenyu kwesokudla uchofoze isithonjana "ikhompyutha yami".
Ake sithi uhlelo Kulungile, kodwa futhi kukhona isikrini SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED yombhalo oqoshiwe. Yini okufanele ngiyenze manje? Ukuze uqale ukuhlola abashayeli divayisi esihambelanayo "Umphathi". Ngokuvamile "fly" isiqophi adapters, ngezinye izikhathi isizathu amakhadi umsindo. Ezimweni ezinjalo kuhle ukususa ngokuphelele nabashayeli abavela uhlelo lwakho uma uqala kwimodi yokuphepha, bese ufake nabo futhi, kodwa kuphela inguqulo yakamuva, ibalwa lesi simiso futhi kulayishiwe kusuka website esemthethweni ye umenzi. Kungenjalo, isibuko nomlayezo SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED Windows 10 lizokunika futhi. Kuyefana nasendleleni le ngemoto, ikakhulukazi ezimweni lapho esikhundleni sabo wenziwa, noma BIOS efanayo efakwe ayilungile usuke Sata abalawuli SCSI / IDE imodi. Kwezinye izimo, imishini enjalo ngokuvamile kuyodingeka esikhundleni ngokuphelele ke.
Ngaphezu kwalokho, kuyinto efiselekayo okungenani ngesikhathi ukufakwa kohlelo ukususa bonke abashayeli ukuthi kungukuthi Ukusebenzisa Nokwengamela Ukusetshenziswa Komfanekiso. Abakwazi nje ukuthuthela endaweni ehlukile, ukuba ivuleke kusukela yokutakula Console, kabusha ufake SCSI- umshayeli noma IDE-amalungiselelo kanye ukuhlonza nabo Abashayeli ifolda kuya System32 lwemibhalo lwemibhalo eyinhloko uhlelo, ngemva kwalokho ukufakwa ungaqhubeka.
Manje amagama ambalwa mayelana BIOS. Imbangela yale iphutha ezifana SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED nalo kungahlanganiswa ngendlela eqondile kakhulu. Kwezinye izimo, kungase kudingeke ukuba ufake inguqulo entsha noma, ngaphezulu nje, firmware. Kodwa okungenani kuyodingeka esikhundleni ngokuphelele BIOS nokuhambisana egcwele.
Kodwa emuva yesistimu yokusebenza. Kungase kube yilawo angenza ukuthi izilungiselelo uzodinga ukukhubaza shadowing kanye Ukulondoloza isikhashana. Nokho, akusiyo njalo kunesidingo.
Ngokusekelwe kulokhu okungenhla, ngaphambi kokufaka isicelo yimuphi izinyathelo ukushabalalisa izinkinga, kubalulekile okungenani ngokubukeka okuthunyelwe ngekhodi yephutha ukuze kutholakale imbangela, ezifana iye yabangela ukubukeka kwayo. Kodwa kubonakala sengathi akekho noyedwa amacala ngaphezulu, mhlawumbe, ngaphandle agqoke BIOS noma ukufaka inguqulo entsha, futhi nzima ukuqonda nokubulawa akuyona.
10-Windows: Umsebenzisi Izibuyekezo
Indlela ukususa uhlelo kusukela "Android", kuhlanganise ejwayelekile
Owaziwa izintatheli Russian. Ukukalwa ekhonjiwe kakhulu izintatheli Russian